Okraina: Andro Erantany Ho an’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovana Gazety Miteraka Fifanakalozan-dresaka Momba ny Toerana Misy ny Fampahalalam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Okraina: Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety Miteraka Fifanakalozan-dresaka Momba ny Toerana Misy ny Fampahalalam-baovao
Voadika ny 05 Mey 2011 12:12 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Ny 3 May dia nambaran'ny Firenena Mikambana ho Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, mba ho fampahatsiarovan-tena amin'ny lanja lehiben'ny fahalalahan'ny mpampita vaovao manerana izao tontolo izao.
Toy ny any amin'ireo firenena maro hafa, toy efa fanaony ao Okraina amin'io andro io dia ny vokatra azon'ireo “Fahavalon'ny fahalalahan'ny Fanaovan-gazety” no ambaran'ireo mpanao gazety. Amin'ity taona ity, ny Ivontoerana ho an'ny Fampahalalam-Baovaom-bahoaka sy ny Sendikan'ny Fahaleovantenan'ny Fampahalalam-baovao Tsy Miankina ao Okraina dia nampiditra ny Filohan'i Okraina Victor Yanukovych sy ny Praiminisitra Mykola Azarov ho any amin'ny voalohan-daharan'ilay “lisitra mainty.” Isan'ny tranga [uk] nahatonga ny Filoha Yanukovych ho tafiditra anaty lisitra ny fanafoanana ny fanakianana ny fitondrana tao amin'ny fitantaràn'ny fantsom-pahitalavitra “1+1” ny 100 andro naha-teo amin'ny fitantanana azy, ny fandraràna ny mpanao gazety ao amin'ny gazety Vechirni Visti tsy hahazo maka sary ny andiam-piara mitondra ny filoha, ary tsy famelàna ny mpanao gazety hametra-panontaniana nandritra ny valan-dresaka niarahany nanao tamin'ny Filoha Rosiana Dmitry Medvedev.
Ny Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety dia niteraka ihany koa adihevitra maro mikasika ny toerana misy ny fampahalalam-baovao ao Okraina sy ny mety ho antony ao ambadiky ny faneriterena atao amin'ny fahalalahan'ny gazety ao amin'ny firenena.
Ao amin'ny bilaoginy Ukrayinska Pravda, ilay mpanao gazety Serhiy Leshchenko dia nanoratra [uk] mikasika ny fahasamihafàna misy eo amin'ny Andro ofisialy ao Okraina ho an'ny Mpanao gazety sy ny Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety:
Andro tsy fiasàna [ankosotra] – Andron'ny Mpanao gazety – misy an'izany ao Okraina, ary ankalazaina isaky ny 6 Jona. Ny manampahefam-panjakana ary fanamafisan'ny didy avoakan'ny Filoha no nametraka io andro tsy fiasàna io. […] Tena faran'izay mifanohitra amin'izay tokony hosainina, mialoha indrindra ny 6 Jona andron'ny mpanao gazety, solombavambahoaka samihafa sy manampahefam-panjakana no niezaka niarahaba ireo birao mpiandraikitra ny editorial miaraka amin'ny “fialantsasatry ny matihanin-”dry zareo. Ny faratampon'izay hagaigena izay dia ny sarin'ny governemanta nanolotra mari-pankasitrahana samihafa ho an'ireo solontenan'ny mpampahalala vaovao mpankato azy ao an-toerana noho ny “fahamendrehany.”
Azo ampiatahaina izany amin'ny, aleo lazaintsika hoe, mpivaro-kena iray miarahaba omby iray amin'ny Andro natokana ho an'ny Hena.
Ny tena Andro ho an'ny Mpanao gazety ho an'ny tontolo manara-penitra dia ny 3 May – Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety. Io no andro iray tsy ankalazàn'ny mpanao gazety na inona na inona, saingy kosa ahatsiarovany ny namany lavo nisy namono, ireo mpanao politika manelingelina azy amin'ny asan-dry zareo, ary ny governemanta izay mametraka ny sakantsakana ho ara-dalàna.
Zoryana Byndas, tonian-dahatsoratra mpanatanteraka ao aminà gazety iray mpiseho anaty aterineto Pohlyad, dia nizara [uk] ny zavatra niainany miharo fahakiviana manoloana ny hoe fahalalahan'ny asa fanaovana gazety misy eo amin'ny orinasan'ny fampahalalam-baovao Okrainiana:
Tsy ela akory izay dia nanatrika fihaonana iray aho niaraka taminà mpanao dokambarotra vaventy. Noresahanay ny tolotra ataony sy ny fomba faran'izay tsara atao mba hanolorana azy ireny amin'ny mpanaky anay, sy manazava tsara ny antsipirihany. Tany amparan'ilay fihaonana, nanontany ahy rangahy io mikasika izay tompon'ny gazety anaty aterineto Pohlyad. Navaliko azy fa ny zavatra rehetra dia efa lazaina daholo ao amin'ny vohikalanay. Nitsiky ilay mpanao dokambarotra goavana no sady niteny hoe, “Eny ary e, ekena, ianao eto izao no tomponandraikitra ao, nefa an'iza izy io, iza no mamatsy vola anareo, vondrona politika inona.” Dia nazavaiko indray. Nanomboka tsy nahatombina ingahirainy ary niteny tamiko ny fomba famatsian'ity ranamana ity vola ho an'io gazety io, izay manana fantsom-pahitalavitra ihany koa. Ary ny fomba anohizan'io gazety io manohana ny asanà antoko politika iray voafaritra, izay midika fa izy no tompon'ny atidoha ao. Resy lahatra ilay rangahy fa ny vondrona kiritika kely toy ny ahy sy ilay namako dia tsy hahavita hampiodina gazety anaty aterineto izany, noho izy ireny noforonina fotsiny mba [hampakàrana ny sasany ary handetehana ny hafa eo imason'ny vahoaka].
“Izay izany,” Tany anatiko tany aho dia nisaina, “marina ny an'ilay rangahy.” Ny mpampahalala vaovao tsy miankina ankehitriny dia [tsy mbola nisy toa azy]. Na dia mbola mitohy miaina any ho any aza izy, misy foana ny hanontany, Inona no fandrika?
Eo amin'ny tambajotra sosialy ara-politika Okrainiana Politiko.ua, Serhiy Trehubenko dia nanakiana [uk] ny mpampahalala vaovao Okrainiana, amin'ny filazàna fa tsy ampy ho an'i Okraina ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety izy tenany fotsiny:
Manohy ny fomba fiasan'ny mpampahalala vaovao Sovietika ny mpampahalala vaovao Okrainiana – an-taratasy, manohana ny fampandrosoana izy, saingy ny zava-bitany dia mampiseho fa tena ratsy lavitra manoatra noho ny fony andron'ny kaominista.
Any amin'ny firenena nahita fivoarana dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra, fa fony fanjakana Sovietika, mila ifampiresahana daholo izao rehetra izao. Tsy ampy ho antsika ny Fahalalahan'ny gazety, mila koa isika manangana gazety misaina sy tompon'andraikitra, izay afaka manazava zavatra araka izay maha-izy azy sy manolotra sosokevitra ho fanatsaràna.
Ao amin'ny Vikna.if.ua, ilay mpitoraka bilaogy Viktoriya Yadoshchuk dia nanoratra [uk] mikasika ny antony tsy anilihana tsotra fotsiny ny Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety ao Okraina:
Mazava loatra, hatramin'ny Revolisiona Volomboasary, lasa demaokratika kokoa ny fiarahamonina ao Okraina noho ny asan'ny gazety. Saingy tsy ampy izany satria ny tena fahalalahana maneho hevitra ao Okraina [tsy mbola tratra]. Ambonin'izany, hatramin'ny [Filoha] Yanukovych tonga teo amin'ny fahefana, araka ny fanarahamason'ny Freedom House, nitontongana raha ny marina ny fahalalahana maneho hevitra […]
Araka ny hitantsika rahateo, saropady ny zavamisy: matahotra hanambàra ny marina indray izao ireo Okrainiana, noho ny fahatahorana ny amin'ny ainy. Heveriko fa ny fiarahamonina ihany koa amin'ny maha-fiarahamonina azy dia tokony handinika ny amin'io olana io. Raha mitambatra hilaza ny marina ny firenena iray manontolo, mety hanohina ny governemanta izay ka hanosika azy ireo [hamerina hijery ny fomba fiasany]. Ndao hailitsika ny tahotra sy ny fisalasalana, ndeha ho mendrika ka tsy hamela ireo eo amin'ny fahefana hanimba ny soatoavina goavan'ny – fahalalahana, fahalalahana hisafidy, fahalalahana hisaina, ary fahalalahana haneho hevitra!
Mialoha ny Andro Erantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, dia namoaka tatitra anasongadinany ny fitontonganan'ny fahalalahan”ny gazety ao Okraina ny Freedom House – ampaham-baovao izay nitampizaràna be teo amin'ny samy Okrainiana mpitoraka bilaogy sy mpampiasa Twitter. Tany ampiandohan'ity taona ity, dia efa nahenan‘ity fikambanana ity lanja ihany koa ny laharana misy an'i Okraina amin'ny resaka fahalalahana, avy any amin'ny “malalaka” ho any amin'ny “malalaka amin'ny ampahany”.